Moe Kai: Remedial medicine
နောက် ခြေထောက်မှာ ခြေစွယ်ငုတ်တော့ တရားစခန်းမှာ ဆိုတော့ အဖေ့ဆီက ပိုးသတ်ဆေးလဲ လှမ်းမတောင်းနို်င်။ ငယ်က ဖခင်ကြီးရဲ. တချို.လူနာတွေ ခြေသဲခွာရတဲ့ အထိ ဖြစ်တာတွေ.တော့ ကျမ ကြောက်ချီးတွေ ပါနေတုန်း တရားဖော် တယောက်က ဖယောင်းစက် ချပေးလိုက် ဆိုတော့ အနာ ချက်ချင်း ကျက်သွားတာလဲ မှတ်မိပါတယ်။ တလောကတောင် အမျိုးသား ခြေစွယ်ငုတ်ပြီး ပိုးဝင်တော့၊ ချက်ချင်းတော့ ကျမရဲ. လျှို.ဝှက် ပညာတွေ ထုတ်မသုံးသေး။ သူ ပိုးသတ်ဆေး (antibiotics) သောက်တာ မသက်သာတော့မှ တတ်တဲ့ ပညာ မနေသာ၊ သူ.ကိုလဲ ဖယောင်းစက် ချပေးလိုက်တာ ချက်ချင်းကို အနာ ကျက်သွားပါတယ်။ အင်္ဂလန်ဆိုတော့ မီးမပျက်တော့ (အဟဲ) ဖယောင်းတုိုင်နဲ. မီခြစ်ကိုတော့ တော်တော် ရှာယူလိုက်ရပါတယ်။
နောက်တခု စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာကတော့ တိုင်းရင်းဆေးထဲ မှာမှ စူလာနဖာ ဆိုတာပါ။ မှတ်မှတ်ရရ ကျမ ဆရာဝန်ဘွဲ.ရခါစ အင်္ဂလန်လာခါနီး ဖေဖေ့ အသိလူနာဟောင်း တယောက် အိမ်ကို လာလည်ပါတယ်။ သူ.ရဲ.ဓါတ်မှန်မှာ အဆုတ်ကင်ဆာ တွေ.လို. ဘယ်လိုကုသရမယ် ဆိုတာလဲ အကြံတောင်းလာပါတယ်။ တခြားတဖက် ကလဲ စူလာနဖာ လို.ခေါ်တဲ့ တိုင်းရင်းဆေးကို သောက်နေတယ်တဲ့။ အဲဒါနဲ. တိုင်းရင်းဆေးလဲသောက် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးက အင်္ဂလိပ် ဆရာဝန်နဲ.လဲပြပြီး ကုသဖို.လုပ်ပေါ့ ဆိုတာ။ ဟော follow up appointment နဲ. ဓါတ်မှန်ထပ်ရိုက်တော့ အဆုတ်မှာတွေ.ရတဲ့ ကင်ဆာလို ထင်ရတဲ့ shadow ကြီးဟာ လုံးဝ ပျောက်သွားတာပါဘဲ။ ဒီစူလာနဖာနဲ. တခြား ကုမရတဲ့ ရောဂါတွေရဲ. အံ့သြဖွယ် ပျောက်ကင်း သွားပုံတွေကို ထပ်ကြားရပါသေးတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို သုသေသန အတိအကျ မလုပ်နုိုင်တော့လဲ ပြောဖို. ခက်သားလားနော်။ တကယ်လို.များ မြန်မာ ဆရာဝန် တယောက်က ကင်ဆာကုထုံး အသစ်ကို ဖော်ပြီး နိုဘယ်လ်ဆုကြီးများ ဆွတ်ခူးနိုင်ရင်လို. ...။